Archive du 20170721
Politika sy Fifidianana Mipararetra amin-dRavalo ny HVM
Hiakam-pifaliana no nandraisan’ny vahoaka tany Mandritsara an’i Marc Ravalomanana omaly.
Fitakiana eto amin’ny firenena “Hatsangano ny antokon’ny mpiasa”
Nandefa taratasy misokatra ho an’ny sendika, firaisamonim-pirenena ary herivelona maro izay samy manao ny fitakiany kanefa tsy mahita vokatra i Toavina Ralambomahay.
Fitokonana sy fitakiana sendikaly Atao ao anatin’ny zo sy lalàna, hoy ny CNIDH
Nilaza ny eo anivon’ny Vaomieram-pirenena momba ny fiarovana ny zon’olombelona (CNIDH) fa zo sy lalàna fototra iraisam-pirenena ny fanaovana grevy ho an’ny mpiasa, ary anisan’ny nankato i Madagasikara ny taona 1970.
Alain Andriamiseza « Voaviravira ny lalàmpanorenana »
Tsy dia hitondra fiovan-javatra manao ahoana, raha ny fanazavan’ny mpanao politika, Alain Andriamiseza, ny fanovana ny minisitry ny vola sy ny tetibola.
CUA-Boriborintany faha-4 Mitohy hatrany ny fanajariana
Noho ny fitandroana hatrany ny ain’ny mponina mba tsy hilatsaka tsy nahy any anatin’ireny « dalle » tsy misarona ireny,
Jean Nirina HAFARI Malagasy Hivoaka amin’ny 25 jolay ny didim-pitsarana
Niakatra fitsarana teny Anosy indray omaly ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina rehefa in-droa nangataka fahafahana vonjimaika saingy tsy nahazo.
Fisolokiana tao Toamasina Orinasam-panjakana maro no efa lasibatr'ilay teratany karana
Maro tamin'ireo orinasa lehibe tao Toamasina no efa nikatona sy nizaka ny tsy eran'ny aina vokatry ny tsy famerenam-bola tamin'ny fisamborana nataona mpandraharaha,
Fanjakana inona loatra ity?
Mahavalalanina ny fomba fiasa sy ny resaka fampiharana lalàna eto amin’ny firenena. Tanteraka ara-bakiteny ny fomba fiteny hoe tatavanina ny moka fa atelina ny rameva.
« Carrefour de la formation des métiers et de l’emploi » Hanampiana ireo afaka Bakalôrea sy mitady asa
Hotanterahina ny zoma 28 sy ny sabotsy 29 jolay ho avy izao etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ilay hetsika “ Carrefour de la formation des métiers et de l’emploi” karakarain’izy ireo.
EPP MAHAVELONA Nomen’ny Airtel fanomezana avokoa ireo afaka CEPE
Notoloran’ny orinasam-pifandraisana Airtel fanomezana avokoa omaly ireo ankizy 52 mianadahy afa-panadinana CEPE tao amin’ny sekoly ambaratonga fototra Mahavelona, sekoly ahian’izy ireo mivantana.
Olombelo Ricky Hampanala azy ny efa zokiny
Miditra amin’ny andiany faha-25 amin’ny 27 jolay izao etsy Antsahamanitra ny hetsika Manala azy vita bacc niarahana tamin’ny mpanakanto Olombelo Ricky isaky ny vita fanadinana bakalorea tao anatin’ny 25 taona izao.